Football Khabar » च्याम्पियन्स लिगको फाइनल चलिरहँदा महिला लुगा फालेर मैदानमा दौडिएपछि …. (भिडियो)
च्याम्पियन्स लिगको फाइनल चलिरहँदा महिला लुगा फालेर मैदानमा दौडिएपछि …. (भिडियो)
गत राति युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल खेल चलिरहँदा एक रोचक दृश्य देखियो । स्पेनको मड्रिडमा उपाधिका लागि इंग्लिस टिम लिभरपुल र टोटनह्याम भिडिरहँदा करिब २० मिनेटको खेल समयमा लिभरपुल १–० ले अघि थियो ।
तर, त्यसैबेला एक महिला दर्शकको भीडबाट दौडिँदै मैदानमा प्रवेश गरिन् । तर, उनले शरीका अधिकाशं लुगा खोलेर मैदानको मध्य भागतिर दौडिन थालिन् । र, खेल रोकियो ।
एक सुन्दरी युवती लुगा खोलेर खेल चलिरहँदा मैदानमा दौडिएपछि प्रहरी पनि मैदान छिरे । र, उनलाई समातरे बाहिर ल्याए । आखिर को हुन् ती युवती ? उनले किन त्यसो गरिन् होला ?
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार ती युवती एक पोर्न साइट सञ्चालक थिइन् । उनले आफ्नो पोर्न वेब साइटको प्रचारका लागि खेल चलिरहँदा यस्तो हर्कत गरेकी थिइन् ।
खबरअनुसार ती युवतीको नाम किन्सी वलान्स्की हो । उनको एक पोर्न साइट छ । उनी त्यसकी सञ्चालक हुन् । उनले यही च्यानलको प्रचारका लागि यस्तो हर्कत गरेकी थिइन् । ‘द सन’काअनुसार किन्सी वलान्स्की चर्चित प्रान्क युट्युब च्यालनकी सञ्चालक भिटाली दोरोभस्कीकी साथी हुन् ।
त्यत्ति मात्रै हैन, उनीहरू युट्युब च्यानलका साथै त्यस पोर्न साइटका पार्टनर हुन् । भिटाली दोरोभस्कीले सन् २०१४ को विश्वकप फाइलनमा यस्तै हर्कत गरेकी थिइन् । यतिसम्म कि, त्यसपछि त उनलाई खेल हेर्नका लागि नै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
प्रकाशित मिति १९ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०५:४४